Kutheni wena kunye noMthengi wakho kufuneka niziphathe njengesibini esitshatileyo ngo-2022 | Martech Zone
Ukugcinwa kwabathengi kulungile kwishishini. Ukukhulisa abathengi yinkqubo elula kunokutsala abatsha, kwaye abathengi abonelisekileyo balindeleke ukuba baphinde bathenge. Ukugcina unxulumano oluluqilima lwabathengi akuzuncedo kuphela umgca osezantsi wombutho wakho, kodwa ukwala ezinye iziphumo ezivakala kwimimiselo emitsha yokuqokelelwa kwedatha efana Ukuvalwa okuzayo kukaGoogle kwiikuki zomntu wesithathu.
Ukunyuka kwe-5% ekugcinweni kwabathengi kuhambelana noko kunyuka kwe-25% kwinzuzo)
I-AnnexCloud, i-21 yeNkcukacha zokuGcina uMthengi owothusayo ngo-2021
Ngokugcina abathengi, iibrendi zinokuqhubeka nokuphuhlisa idatha yeqela lokuqala, (esekwe kwindlela abathengi babo abanxibelelana ngayo kunye nokusebenzisa iimveliso zabo) ezinokuthi ke zisetyenziswe ukwenza unxibelelwano lwexesha elizayo kunye nabathengi abasele bekho kunye namathemba. Ezi zizathu kungenxa yokuba, ngo-2022, abathengisi kufuneka bagxile ngakumbi ekugcineni kunye nokukhulisa ubudlelwane obukhoyo babathengi, ngokufanayo nendlela obuya kwenza ngayo neqabane lakho.
Ukuba kubudlelwane kuthatha inkathalo kunye nengqalelo - awulihoyi iqabane lakho nje ukuba ubuhlobo buqala. Ukuthenga iqabane lakho iitshokolethi abazithandayo okanye iintyatyambo kufana nokuthumela i-imeyile eyenzelwe wena kumthengi-ibonisa ukuba uyabakhathalela kunye nobudlelwane ekwabelwana ngabo nobabini. Okukhona umzamo kunye nexesha uzimisele ukulifaka ekwakheni ubudlelwane, kokukhona omabini amacala anokuzuza kulo.
Iingcebiso zokugcina abaThengi bakho
Qhubekani nazana. Ubudlelwane bakhelwe kwiziseko ezomeleleyo, ngoko ke, ukwenza nokugcina uluvo oluhle kunokubaluleka kakhulu.
Ukukhwela -Ukudala iphulo lokukhuliswa kwebhodi, apho uvula imigca ethe ngqo yonxibelelwano, inceda ukuseka ishishini lakho njengeqabane, hayi nje umthengisi kumthengi wakho omtsha. Olu nxibelelwano luthe ngqo lukwavumela ukuba ukhawuleze kwaye uthembeke kwiimpendulo zakho xa umthengi esiza kuwe ngombuzo okanye umba, oyimfuneko ekwakheni ukuthembana. Kufuneka uyisebenzise ukujonga kwaye ufumane nayiphi na ingxelo abanokuthi banayo ukuze uphucule ngcono amava abo. Ngapha koko, unxibelelwano lungundoqo kubudlelwane.
YokuThengisa -Nyusa ukuthengisa okuzenzekelayo. Intengiso ye-automation ayenzi lula kuphela inkqubo yokukhulisa, inokukunceda ukuba uqokelele kwaye usebenzise idatha ebalulekileyo malunga nabathengi bakho. Abathengisi banokungena kwiimbono ezibandakanya ukuba zeziphi iimveliso okanye iinkonzo abanomdla kuzo, indlela abazisebenzisa ngayo iimveliso okanye iinkonzo zakho, okanye ukuba baye bajonga iwebhusayithi yakho. Le datha ivumela abathengisi ukuba bachonge iimveliso okanye iinkonzo zabathengi kufanele basebenzise, ​​ukubanika ithuba lokuthengisa abathengi babo ngokuhlangabezana neemfuno zabo. Kanye njengoko unikela ingqalelo kwiqabane lakho ukuba ulindele oko banokukufuna okanye bakufunayo, okufanayo kufuneka kwenziwe kubathengi bakho, njengoko kuvula umnyango wenzuzo eyongezelelweyo.
Ukuthengisa kweSMS -Hamba ngeselula ngentengiso yeSMS. Iyavakala kuphela into yokuba ukuthengisa ngeSMS kuyanda ngokuxhaphaka kwee-smartphones namhlanje. Intengiso yeselula inika inkampani umbhobho othe ngqo esandleni somthengi, kwaye imele indlela esebenzayo yokudlulisa ulwazi olubalulekileyo nolufanelekileyo. Imiyalezo yeSMS inokuqulatha izivumelwano zokuthengisa, amanqaku okuxabisa abathengi, uphando, izibhengezo kunye nokunye, konke ukugcina umthengi ebandakanyeka kwaye onwabile. Kanye njengokuba ungena neqabane lakho okanye wabelana ngeenkcukacha zosuku lwakho ngeSMS, kuya kufuneka wabelane ngolwazi nabathengi bakho nabo, ngetshaneli esebenzayo nesebenzayo.
Iibhrendi ezisebenzisa itekhnoloji ukwenza unxibelelwano olunzulu kunye nabathengi bazo, zihlala zibonelela ngexabiso ngokuthumela imiyalezo eyenzelwe wena, kunye nokugcina imigca evulekileyo yonxibelelwano iya kwakha ubudlelwane obunentsingiselo kunye nabathengi babo. Okukhona intsebenziswano phakathi kwala maqela mabini isiya iqina, kokukhona ngamnye enokuphuma kuwo – njengobudlelwane neqabane lakho.
tags: isenzoyenza kwisoftwareUmthetho-Onannexcloudubudlelwane abathengiukugcinwa kwabathengiubudlelwane umthengisi umthengiukuzenzekela ngokuzenzekelayoItekhnoloji yentengisomartechumthengisi martechurhwebo mobileukukhwelaNgokwezifisoukuthengisa ii-smsukuthengisa imiyalezoii-cookies zomntu wesithathu